ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်က Apple အား Apple နှင့် Macintosh အသုံးပြုမှုကိုတရားစွဲ Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, စက်တင်ဘာလ 28, 2006 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ဒါမှမဟုတ်… Indiana Pea Farmers က Apple ကို Pod ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။.
ဒါမှမဟုတ်… Arthur C. Clarke သည် Pod ကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့် Apple ကိုတရားစွဲ။ သတိရပါ၊ “ Pod တံခါးပိတ်ခြင်း၊ Hal ။ ”
ဒါမှမဟုတ်… ရော့ခ်ဂီတအဖွဲ့ The Breeders က Apple ကို 'Pod' ဟူသောစကားလုံးအသုံးပြုမှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။။ သူတို့ရဲ့အယ်လ်ဘမ်တစ်ခု၏အမည်။
Apple ကမင်းကိုနောက်နေတာလား သင်၏စျေးကွက်သမားအားလုံးသည်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်ဝေါဟာရကိုကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်သုံးဘာသာစကားဖြင့်ကြိုးစား။ နေ့ရောညပါဖြုန်းတီးကြပြီးယခုတွင်ထိုနေရာ၌သင်ဖြတ်တောက်လိုပါသလား။ မင်းငါ့ကိုနောက်နေတာလား? ကျွန်ုပ်၏အသုံးအနှုန်းများသည်ကျွန်ုပ်တီထွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သောစျေးကွက်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည့်နေ့အတွက်ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။
ဒါက Google က Googling ကိုတရားစွဲတာနဲ့တူသလိုရယ်စရာလည်းကောင်းတယ်။ ရှေးရှေးထိုအသုံးအနှုန်းကိုအသုံးချနေသောနှုတ်ဖြင့်ကြော်ငြာကိုသင်မည်မျှဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာချွေတာနေသနည်း။ အခုသင်ပိုလိုချင်လား ဒါဟာပြီးသားသူ့ဟာသူများအတွက်ပေးဆောင်! လူများက“ Web ကိုရှာပါ” ဟုပင်မပြောဆိုကြပါ။
အကယ်၍ သင်သာ Google မှာဆိုရင် Macintosh Apple ကို Web Search လုပ်ရင်ပန်းသီးလုပ်ငန်းမပေါ်လာဘူးဆိုတာသင်သိပါသလား။ Macintosh ပန်းသီးကိုအွန်လိုင်းမှမည်သူမျှရှာမတွေ့သောကြောင့် ၀ ါရှင်တန်ပြည်နယ်အနေဖြင့် Apple ကုမ္ပဏီအားအက်ပဲလ်ကုမ္ပဏီ၏ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတွက်တရားစွဲရန်အချိန်တန်ပြီဖြစ်သည်။
ချက်ချင်းထိရောက်မှုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်၊ ငါတို့အားလုံးဟာအက်ပဲလ်ရဲ့ဆန္ဒကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ် Zune။ ယနေ့မှစ၍ Podcasting ကို“ Zuning” ဟုခေါ်သင့်သည်။
'Pod' နှင့်ပတ်သက်သည့် Apple ၏ suite ဆိုင်ရာပုံပြင်အပြည့်အစုံ
Payraise Calculator AJAX ဗားရှင်းတက်နေပြီဖြစ်သည်။
စက်တင်ဘာ 28, 2006 မှာ 9: 20 AM
Orâ? Indiana Pea Farmers က Apple ကို“ Podâ” ကိုသုံးခြင်းဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။
Orâ? ¦ Arthur C. Clarke က "Podâ" ကိုသုံးခြင်းဖြင့် Apple အားတရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ သတိရပါ၊ `တံခါးပေါက်ပိတ်ခြင်း၊ Hal.â ???
ရော့ခ်ဂီတအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ The Breeders က Apple က“ Podâ” ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးပြီးတရားစွဲဆိုလိုက်သည်။ သူတို့ရဲ့အယ်လ်ဘမ်တစ်ခု၏အမည်။
ငါဆိုလိုတာကဟေး, Mac bashing နှင့်အတူအလုံအလောက်ဆိုလို! ... အိုးငရဲပင် I Apple ကိုသူတို့လုပ်နေတာတွေအတွက်အကြောင်းပြလို့မရဘူး အနှေးနှင့်အမြန်အာဏာသည်သူတို့ခေါင်းပေါ်သို့ရောက်သွားနိုင်သည်မှာမလွှဲမရှောင်သာဖြစ်သည်။
30:2006 pm တွင်စက်တင်ဘာ 9, 46 မှာ
ဘုရားသခင်က Apple ကို“ I” အကြောင်းတရားစွဲဆိုခဲ့သည်။